Culusoow oo la aamini waayey | allsanaag
Culusoow oo la aamini waayey
Goobtii Xasan Culusoow soo sahansaday in doorashada lagu qabto oo laga bedelay
Sawirka sare Waa maleeshiyaad beeleedka Xasan Culusoow oo marna afka soo duubta marna sheegta ciidan qaran
Guddiga Doorashadda MadaxweynahaSoomaaliya, ayaa Shaaciyay in laga wareejiyay dugsiga tababarka ciidamada Boliiska Jen. Kaahiye oo lagu waday in ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha, kaddib markii ay ka baqeen qaar ka mid ah musharraxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha. Sababtoo ah waxay ahayd meel uu horay u soo sahansaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Culusoow oo intuu xilka hayey Muqdisho lagu dilay Xildhibaano badan oo ka mid ah baarlamaanka sOOMAALIYA
Guddoomiyaha Guddiga Doorashada maxaweynaha Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in guddigooda ay isbaddal ku sameeyeen halkii lagu qaban lahaa doorashadda kaddib cabasho ka timid qaar ka mid musharrixiinta.
Xildhibaan Beyle ayaa sheegay in guddiga doorashadda ay go’aamiyeen doorashadu in ay ka dhacdo Xarunta Afisyooni ee ciidamada Cirka, halkaa soo u dhaxeysa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo Dugsiga Tababarka Booliska ee Jen Kaahiye.
← Senior Labour female MPs will boycott if Donald Trump addresses Houses of Parliament Xasan Culusoow oo looga mudaharaaday magaalada Muqdisho →